Shirkada SAS oo joojineysa Duulimaad tiro badan Xagaagan
HomeWararka CaalamkaShirkada SAS oo joojineysa Duulimaad tiro badan Xagaagan
May 10, 2022 Wararka Caalamka, Wararka Maanta 0
Shirkadda diyaaradaha ee SAS ayaa joojisay ilaa 4,000 oo duulimaad intii u dhaxaysay May iyo August, sababo la xidhiidha shaqaale la’aan iyo dhibaatooyin la xidhiidha keenista diyaarado cusub, iyadoo ururka duuliyayaasha ay ka digeen in duullimaadyo kale la baajiyo wakhti gaaban xagaagan.
SAS waxay hore u qorsheysay 75,000 duullimaad muddadaas. Haddaba, safarrada la joojiyay waxay ka dhigan yihiin ku dhawaad ​​5 boqolkiiba wadarta guud ee safarradan la qorsheeyay.
Ururka duuliyayaasha, Martin Lindgren, ayaa ku tilmaamay mid laga naxo.
Marka loo eego SAS, dhibaatooyinka shaqala’aantu waxay soo taxnayd xilligii COVID-19, iyadoo baahida hoos u dhacday ay hoos u dhigtay baaxadda hawlgallada iyo tirada duuliyayaasha. Tani waa sababta ugu weyn ee SAS ay hadda u joojisay tiro badan oo bixitaan ah, iyo sidoo kale dhibaatada dib u dhaca ku yimid keenista diyaaradaha cusub.
Afhayeenka shirkadda diyaaradaha, Karen Niemann, ayaa xustay in shirkado badan oo diyaaradeed oo Yurub ah ay ku qasbanaan doonaan inay joojiyaan duulimaadyada inta lagu jiro xilliga xagaaga.